Sirdoonka Itoobiya oo soo bandhigtay Koox falal argagixiso qorsheynayeen – AfmoNews
Sirdoonka Itoobiya oo soo bandhigtay Koox falal argagixiso qorsheynayeen
Sirdoonka dalka Itoobiya ayaa soo bandhigay 12 ruux oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab iyo Daacish, kuwaasoo qorsheynayay inay falal argagixiso ka fuliyaan magaalada Addis Ababa iyo qeybo ka mid ah dalka Itoobiya.
War ka soo baxay Hey’adda Sirdoonka Itoobiya NISS ayaa sheegtay in raggan la qabtay muddo lagu dabajiray, isla markaana qabashadooda gacan ka geysteen shacabka.
Ragga la qabtay ayaa la soo bandhigay sawiradooda, waxaana ay ahaayeen shabakad isku xiran oo weeraro qorsheysanayay.
Warka ka soo baxay Sirdoonka Itoobiya ayaa lagu sheegay in labada koox argagixiso ay rag qorteen, ayna tababarteen, si ay ugu fuliyaan qorshahooda.
Sidoo kale waxaa ay doonayeen inay ka faa’ideystaan qalalaasaha ka socda Itoobiya, gaar ahaan howlgalka dowladda Itoobiya ku qaaday Gobolka Tigray.
Ragga la qabtay oo labo koox kala ahaa ayaa kooxda hore waxay kala yihiin Abdrohman Aden Abubeker, Muktar Gab Gosa, Gama Direye Abdi, Shiek Ahmed Nur Mohammed Ousman, Kusow Aden Hussien, Mohammed Hassen Aden Oumer iyo Redwan Muhad.
Halka Kooxda labaad oo uu hoggaamiyo Aseffa Gedimwork ay kala yihiin Fuad Shifa Kedir, Abduljebar Abdella Ibraim, Sied Mustafa Ibrahim, Musuj Sajibo Gebeyehu and Belay Teshome (Idris)
Napoli Stadium was renamed after Maradona to honor their football legend
Kamala Harris cancels the trip due to positive cases in her team